Madaxweyne Xasan: Shabaab la xiray looma doodi karo, sharciga ayaa la marinayaa – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
A warsame 23 February 2014 4 April 2019
Muqdisho – Mareeg.com: Madaxweynaha Soomaaliya, Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amar ku bixiyey inaan dadka qaraabadiisa ah ka daba ordin shakhsiyaadka ku eedeysan Alshabaab ee lasoo xiro, taasoo ah arrin marar badan soo laalaabata.
Madaxweyne Xasan oo ka hadlayey xuska sanad guuradii 44-aad ee kasoo wareegtay markii la aasaay ciidanka Asluubta Soomaaliya ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in wasiiro, xildhibaaano, Jeneraalo, odayaal iyo ganacsato ay u doodaan Shabaab ay qaraabo yihiin oo dowladda Soomaaliya xirtay.
Madaxweyne Xasan ayaa yiri “War haddii Shabaab lasoo xiro yeysan soo dabakicin wasiirrada, xildhibaanada, Jananada, odyaasha iyo ganacsatadu, haddii lasoo daba ordo Shababaab kasta ee lasoo xiro sidee uga adkaaneynaa nimankaas?”
Wuxuu sheegay Madaxweyne Xasan Sheekh in qofkii loo xiro Shabaab ahaan ee lagu waayo la sii deynayo, iyadoo weliba la cadeynayo inuusan ururkaas ku jirin, hase ahaatee qofkii lagu helo sharciga la maraniyo.
Saraakiisha iyo madaxda dowladda iyo beelaha ayaa lagu eedeeyaa iney u doodaan dhallinyarada ay qaraabada yihiin ee ka tirsan Alshabaab, arrintaas culeys badan ku keentay arrimaha amaanka iyo howlaha garsoorka.